डीपीएल विजेताले ३० लाख दिने घोषणा, प्रवेश टिकट ५०, ७० र १०० रुपैयाँ | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध डीपीएल विजेताले ३० लाख दिने घोषणा, प्रवेश टिकट ५०, ७० र १०० रुपैयाँ
on: २४ माघ २०७५, बिहीबार १३:२२ खेल विविध
माघ २४, काठमाडौं । यही माघ २६ देखि फागुन ११ गतेसम्म धनगढीमा हुने तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले रू. ३० लाख पाउने भएको छ । आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीले विगतका संस्करणझैं यसपटक पुरस्कार सर्वाधिक धनराशिको रहने जानकारी दिए ।
उनले प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा २० प्रतिशत बढाइएको बताउँदै प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि रू. ६० लाख रहेको बताए । त्यसमा विजेताले रू. ३० लाख, उपविजेताले १२ लाख, तेस्रो हुनेले रू. ४ लाख तथा चौथो हुने टोलीले रू. २ लाख पाउनेछन् ।
आयोजकका अनुसार मैदान तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको काम लगभग सकिएको छ । ‘मैदान तथा पाँचओटा पिच निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतियोगिता आयोजनाका विभिन्न समितिले पनि आआफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
‘क्रिकेटलाई अझ योजनाबद्ध र व्यावसायिक हिसाबले लैजान धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) जहिले पनि नयाँ योजनाका साथ आउने गरेको छ, सोही परिवेशमा शहर केन्द्रीत ‘फ्रेन्चाइज’ सोचको क्रिकेटलाई थप परिस्कृतरूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)बाट मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता डीपीएल–३ मा धनगढी स्टार्स, रुपेन्देही च्यालेन्जर्स, महेन्द्रनगर यूनाइटेड, सिवाइसी अत्तरिया, काठमाडौं गोल्डेन्स र विराटनगर किंग्सको सहभागिता रहनेछ । सबै टोलीमा १२ ‘अक्सन’बाट लिइएका खेलाडी (स्थानीयसहित), एक रणनीतिक खेलाडी र दुईजना विदेशी खेलाडी रहने छन् ।
प्रतियोगिताको ‘गुडविल एम्बास्डर’मा दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्स रहेका छन् । रोड्स माघ २४ गते धनगढी आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै प्रतियोगिताको गोल्डस्टार मोष्ट भेल्युएवल प्लेयरलाई गोल्डस्टार सुनको जुत्ता दिइनेछ । प्रत्येक खेलका नबिल बैंक म्यान अफ द म्याचलाई रू. १५ हजार, म्यान अफ द सिरिज, वेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरलाई समेत उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रू. ५ करोड खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । पहिलो संस्करणको डीपीएलको बजेट रू. १ करोड ८२ लाख थियो भने कुल पुरस्कार रू. २८ लाख ५० हजार थियो । यस्तै दोस्रो संस्करणमा रू. ३ करोडको लागतमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो, जसमा विजेतालाई रू. २५ लाखसहित कुल रू. ५० लाख पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
पहिलो खेल माघ २६ गते शनिबार दिउँसो १ बजे शुरु हुनेछ । त्यसअघि उद्घाटन कार्यक्रम रहनेछ । प्रतियोगिता टि–२० को आधारमा हुनेछ । लिग चरणमा प्रत्येक टिमले एकापसमा एक–एक खेल खेल्ने छन् । शीर्ष चार टोली प्ले–अफमा पुग्नेछन् । त्यसमा पहिलो र दोस्रो हुने टिमको विजेता फाइनल पुग्नेछ । त्यसमा पराजित हुने टोलीले तेस्रो र चौंथो हुने टिमसँगको विजेतासँग फाइनल प्रवेशको लागि खेल्नेछ ।
दोस्रो संस्करणमा झैं यस संस्करणमा पनि प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा डीसीएले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामामा सहभागी एक पूर्व खेलाडीलाई ‘धनगढी क्रिकेट सम्मान’ तथा नेपाली क्रिकेटमा महत्वपूर्ण योगदान दिने एक व्यक्तिलाई ‘अर्जुन खड्का स्मृति सम्मान’ स्वरुप रू. १/१ लाखको पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ ।
अस्थायी प्यारापिट निर्माण र यातायात सेवा
प्रतियोगिताका लागि पाँच हजार दर्शक क्षमताको अस्थायी प्यारापिट निर्माण गरिसकिएको छ । दर्शकका लागि टिकटदर लिग चरणमा रू. ५०, प्ले–अफमा रू. ७० र फाइनलमा रू. १०० तोकिएको छ ।
टिकट बिक्रीको २० प्रतिशत रकम फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण अभियान (ड्रिम फाप्ला) लाई छुट्याइने तथा ४० प्रतिशत रकम सहभागी टिमलाई प्रदान गरिनेछ । दर्शकको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी संघ, कर्णाली रिभर यातायात संघ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा दैनिक क्याम्पस रोडदेखि फाप्ला क्रिकेट मैदानसम्म निःशुल्क बस सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
नेपाल र यूएईबीचको एकदिवसीय क्रिकेटका कारण डीपीएल लिगको मिति सर्‍यो
१० पुष २०७५, मंगलवार १५:४२
डीपीएलका लागि खेलाडी दर्ता खुला, सबै एउटै वर्गमा, मूल्य ३० हजारदेखि साढे २ लाखसम्म